म नि: शुल्क लोगोको डिजाइन कसरी गर्न सक्छु? - Print Peppermint
म नि: शुल्क लोगोको डिजाइन कसरी गर्न सक्छु?
नोभेम्बर 23, 2018 | ब्रान्डिङ, नि: शुल्क संसाधन, ग्राफिक डिजाइन, लोगो डिजाइन
नि: शुल्क लोगोको डिजाइन कसरी गर्ने
द्वारा डिजाइन: केरेन शावित
एक लोगो डिजाइन गर्न को लागी कहीं पनी तपाइँको समय को २ देखि ५+ घण्टा को बीचमा, र कहीं पनि $ ५० देखि $ ५०० वा तपाइँको पैसा को धेरै को बीचमा लिन सक्छ। तर सौभाग्य देखि पर्याप्त, अफलाइन सफ्टवेयर र लोगो निर्माताहरु को दुनिया दिन बचाउन सक्नुहुन्छ।
यो संभव भन्दा बढी एक प्रभावी, सफल र अविस्मरणीय व्यापार लोगो मिनेटमा या अधिक कम डिजाईन गर्न को लागी हो। यो पनि नि: शुल्क हो। त्यहाँ मूलतः तीन तरिकाहरू छन् जुन तपाई नि: शुल्क लोगो डिजाइन गर्ने प्रक्रियामा जान सक्नुहुन्छ:
अनलाइन लोगो निर्माताहरू
द्वारा डिजाइन: जुएगामेनिया डिसेओ
जस्तै FLD Freelogodesign or लगस्टर लोगो जेनरेटर। तर यदि तपाइँ FLD लाई तपाइँको डिजाइन को आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्नुहुन्न, यी जाँच गर्नुहोस् १ best उत्तम नि: शुल्क अनलाइन लोगो निर्माताहरू। तिनीहरू सबै पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, अनुकूलन योग्य र नेभिगेट गर्न सजिलो छन्।
अनलाइन लोगो निर्माताहरू प्रयोग गर्नेहरू:
तपाईं अनलाइन टेम्प्लेटको दायराबाट छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंको डिजाइन बचत गर्न यसमा पछि काम गर्ने विकल्प छ।
तपाईं सजिलै सित्तैमा आफ्नो डिजाइन डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
सफ्टवेयरले डिजाइन प्रक्रियाको बखत विभिन्न बिन्दुहरूमा प्रतिक्रिया, सुधार र सुझावहरू आदि उत्पन्न गर्दछ।
अनलाइन लोगो निर्माताहरू प्रयोग गर्ने विपक्ष:
खराब इन्टरनेट जडानले तपाईंको सम्पूर्ण प्रोजेक्ट गडबड गर्न सक्दछ।
टेम्पलेटहरू केवल सीमित संख्यामा अनुकूलित गर्न सकिन्छ।
तपाईसँग भएको काम गर्नुपर्दछ।
डाउनलोड योग्य अफलाइन लोगो डिजाइन सफ्टवेयर
द्वारा डिजाइन: TKoenigs डिजाइन एजेंसी
जस्तै जेटा, किनकि चलो यसको सामना गरौं, अनलाइन सफ्टवेयर र प्लेटफार्महरु को माध्यम बाट काम सबै को लागी होईन। समस्या को एक धेरै बीचमा पैदा हुन सक्छ, एक सामान्य एक नराम्रो इन्टरनेट जडान भएको छ। त्यसैले यी जाँच गर्नुहोस् एक लोगो डिजाइन को लागी नि: शुल्क अफलाइन सफ्टवेयर.
अफलाइन लोगो डिजाइन सफ्टवेयर को उपयोग को पेशेवरहरु:
तपाईसँग यी लागि निरन्तर इन्टरनेट जडान हुनु आवश्यक छैन, स्पष्ट छ।
तिनीहरू धेरै, धेरै, नि: शुल्क डिजाइन उपकरणहरूको साथ आउँदछन्।
अफलाइन लोगो डिजाइन सफ्टवेयर को उपयोग को विपक्ष:
सफ्टवेयर आफैंमा तपाईको पीसी प्रणालीमा धेरै ठाउँ खपत गर्न सक्दछ।
यो नि: शुल्क विज्ञापनहरू सबै पप अप गर्न सक्दछ, र ती प्याकेजको साथ आउँदा तपाईं मुक्त हुन सक्नुहुन्न।
सफ्टवेयरसँग अन्तर्निर्मित मेकानिजम हुन सक्छ वा छैन, यसैले यसले डिजाइन प्रक्रियाको क्रममा फरक बिन्दुमा प्रतिक्रिया, सुधार र सुझावहरू आदि उत्पन्न गर्दछ।
तपाईको प्रणालीमा निर्मित कला उपकरणहरू मार्फत
द्वारा डिजाइन: अक्टभियन चेलर
जस्तै 3D प्यान्ट। यो माथि उल्लेखित उपकरणहरू भन्दा पर्याप्त सजिलो छ। तपाईं सजिलैसँग तपाईंको लोगोको भेक्टर सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि यसलाई अनुकूलित गर्नुहोस्।
प्रणालीको इन-बिल्ट आर्ट टूलहरू प्रयोग गर्ने पेशेवरहरू:
सेटअप को माध्यम बाट नेभिगेट गर्न को लागी धेरै सजिलो छ।
तपाईं आफ्नो उपकरणहरू कला उपकरण भित्रै परियोजनाको रूपमा बचत गर्न सक्नुहुनेछ र कुनै पनि समयबाट यसलाई खोल्न सक्नुहुन्छ र तुरुन्तै यसमा काम सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
यो सबै समय उपभोग गर्ने होइन; तपाईले गर्नु पर्ने भनेको एक भेक्टर डिजाइन गर्नु हो र तपाईको डिजाइन अनुसार यसलाई अनुकूलित गर्नुपर्दछ।
प्रणालीको अन्तर्निर्मित कला उपकरणहरू प्रयोग गर्ने खण्ड:
तपाईंको निपटानमा डिजाइन विकल्पहरू माथि उल्लेखित उपकरणहरूको तुलनामा धेरै सीमित हुनेछन्।
त्यस्ता उपकरणहरू डिजाइन प्रक्रियाको बखत प्रयोगकर्ताका लागि कुनै प्रतिक्रिया, सुधार वा सुझावहरू आदि उत्पन्न गर्न क्षमता आउँदैनन्।
जुनसुकै विधि जुन तपाइँले छान्नुभयो, याद गर्नुहोस्:
एकचोटि तपाईले आफ्ना सबै आवश्यकताहरूको मूल्या have्कन गरिसकेपछि जुन विधि तपाईंलाई उत्तम लाग्छ त्यसलाई छान्नुहोस्।
यदि तपाईंको व्यवसायलाई यसको लोगो मार्फत उत्तम दर्जेको, पेशेवर सन्देश दिन आवश्यक पर्दछ भने, अनलाइन लोगो निर्माताहरूका लागि जानुहोस् जहाँ तपाईं त्यस्ता टेम्प्लेटहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईंसँग अनलाइन प्लेटफर्महरू मार्फत काम गर्ने समय छैन भने, उत्तम, शीर्ष-र्यान्स्ड र पूर्णतया नि: शुल्क लोगो डिजाइन जेनेरेटरहरू मध्ये एक डाउनलोड गर्नुहोस् र तपाईंको गतिमा तपाईंको लोगो सिर्जना गर्न काम सुरू गर्नुहोस्।
र यदि तपाइँ अझै पनी यी सबै सफ्टवेयर को कारण तपाइँको आँखा मा धेरै तनाव पाउनुहुन्छ, मानौं, उनीहरुको यति सीधा नेभिगेसन छैन, तपाइँ सधैं को लागी छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। 3D प्यान्ट र अन्य पीसी प्रणालीमा निर्मित अन्य त्यस्ता अफलाईन उपकरणहरू।
जब तपाईं यी मध्ये कुनै एक नि: शुल्क लोगो डिजाइन विकल्पहरूको प्रयोग गरेर तपाईंको लोगो डिजाइन गर्नुहुन्छ, यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको लोगो:
तपाईंको ब्रान्डको पर्सोना साँच्चिकै प्रतिबिम्बित गर्दछ
तपाईं के सेवाहरू प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ र किन? के त्यहाँ त्यस्ता सेवाहरूको आवश्यकता छ? तपाइँको लक्षित श्रोतालाई तपाइँको ब्रान्डको सन्देश के हो? तपाईंको लोगो यस्तो सबै कारकहरूको सही प्रतिबिम्ब हुनु पर्छ।
सम्बन्धित: कसरी आफूलाई वा तपाईंको कम्पनीलाई ब्रान्ड गर्ने
तपाईंको श्रोतालाई बोल्छ
जब उनीहरू पसलमा कतै शेल्फमा राखिएको उत्पादनमा तपाइँको लोगो हेर्छन्, के तिनीहरू यससँग सम्बद्ध भएको महसुस गर्छन्? के तिनीहरूले केवल तपाईंको लोगो हेरेर अरूलाई तपाईंको ब्रान्ड सुझाव दिन्छन्?
के तपाइँका ग्राहकहरु तपाइँ, तपाइँको व्यक्तित्व, तपाइँको ब्रान्ड, तपाइँको ब्रान्ड सन्देश र तपाइँको ब्रान्ड संग जोडिएको सबै चीज तपाईको लोगोको झलकले सम्झने छन्? के उनीहरूले १०० अन्य लोगोमा पेन्ट गरिएको बिलबोर्डबाट तपाईंको लोगो चिन्न सक्छन्?
सही शैली र प्रकार छ
द्वारा डिजाइन: टाइपबॉय आन्द्रेई ग्रिगोरिउ
हो, त्यहाँ दुई बीच भिन्नता छ। र यदि तपाईं लोगो डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं योसँग परिचित हुनुपर्दछ।
तपाईंको लोगो को शैली यसको समग्र ढाँचा र रूप को सन्दर्भ गर्दछ। यसले उत्तम, ग्रन्ज, भिन्टेज, हस्तनिर्मित, आधुनिक, न्यूनतम र अन्य प्रकारका शैलीहरू सामेल गर्दछ।
अर्कोतर्फ, पाठ, छवि र / वा दुईको संयोजन, तपाईंको कम्पनीको नामको इनिशियल्स आदि… त्यस्ता चीजहरू लोगो प्रकारका अन्तर्गत आउँदछन्।
तपाईको ब्रान्ड के भित्र आउँछ? के तपाईंले आफ्नो लोगोको लागि छनौट गर्नुभएको शैली र प्रकार उस आलाको लागि उपयुक्त छ? यदि तपाईंको ब्रान्ड कला र शिल्पसँग सम्बन्धित छ भने, के तपाईंको दर्शकहरूले पहिलो पटक तपाईंको लोगो हेरेर त्यस कुराको कल्पना गर्न सक्दछन्?
उत्तम रंग योजना छ
डिजाइन: जहादुल इस्लाम
के तपाईंको लोगोको रंगहरू तपाईंको ब्रान्ड व्यक्तित्व र तपाईंको ब्रान्डको नाममा पहिले नै अवस्थित र matchहरू मेल खान्छ? के तपाईंले एकमा सेटल्ट हुनु अघि विभिन्न र color्ग टोनहरू प्रयोग गरेर हेर्नुभयो? के रंगहरू तपाईले आफ्नो ब्रान्डको सन्देशको प्रतिबिम्बित छ?
एक अद्वितीय टाइपोग्राफी छ
द्वारा डिजाइन: जिप्पी पिक्सल
यदि तपाईंको लोगोमा पाठ समावेश छ, जस्तै तपाईंको ब्रान्डको नामको नाम, के यो रंग योजना र तपाईंको लोगोको शैली र प्रकारसँग राम्रोसँग जान्छ? यो धेरै छ, वा धेरै कम? यदि तपाइँको लोगो फन्ट हस्तनिर्मित गरिएको थियो भने अधिक प्रभावी र यादगार हुनेछ?
के तपाईंले एक लोगो डिजाइन गर्नुभयो जुन पिनको टाउकोमा फिट हुनको लागि मापन गर्न सकिन्छ? यो क्यान, टी-शर्ट र मग आदि जस्ता सामानहरूमा छाप्न सकिन्छ र अझै सजीलो हुन सक्छ? के यो राम्रो देखिन्छ यदि यसलाई बिलबोर्डमा फिट गर्नको लागि विस्तार गरिएको थियो?
पूर्वानुमान योग्य छैन
यदि तपाइँ तपाइँको लोगो प्रत्येक डिजाइन पक्ष मा "अद्वितीय" हुन चाहानुहुन्छ, यो पहिले देखि नै बाहिर प्रत्येक अन्य लोगो भन्दा फरक देखिनु पर्छ। हो, यो तपाइँको ब्रान्डको को अनुरूप को रूप मा हुनु आवश्यक छ, तर एकै समयमा, यो यसको प्रकार को एक हुनु पर्छ।
डिजाईन ट्रेंडको साथ राख्छ
के तपाईं १०१ लोगो डिजाईन गर्ने तरिकाहरूको साथ आफैं परिचित हुनुभयो? के तपाईंको लोगोले आधारभूत डिजाइन सिद्धान्तहरू र आधारभूत कुराहरू पूरा गर्दछ? के तपाइँको लोगो यसको आफ्नै प्रवृत्ति सेट गर्न जाँदैछ, वा केहि समय पछि यो पुरानो हुँदै जान्छ?
समय रहित छ
भएको छ लोगो डिजाइन गर्नुहोस् - यसले तपाईलाई केहि खर्च लाग्दैन भने पनि - व्यस्त काम हो। त्यसैले लोगो डिजाइन गर्न निश्चित गर्नुहोस् जुन केहि समय पछि पुन: डिजाइन गर्न आवश्यक पर्दैन। यसले परिवर्तनहरूको सामना गर्नुपर्दछ जुन ब्यापार संसारमा, वा अरू कतै देखा पर्दछ।
तपाइँलाई तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूबाट फरक पार्दछ
द्वारा डिजाइन: रस एन
यो जहाँ तपाइँको लोगो तपाइँको प्रतियोगिताहरु देखि बाहिर खडा गर्न को लागी यसको सबै घटक तत्वहरु लाई एक साथ ल्याउँछ। जब तपाइँको दर्शकले तपाइँको ब्रान्डको लोगो देख्दछन्, तिनीहरू तत्काल तपाइँको ब्रान्डमा केहि शब्दहरू लिन्छन्, तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूको लागि प्रयोग गरेको भन्दा फरक शब्दहरू।
नि: शुल्क लोगोको डिजाइन गर्ने को लागी सल्लाह
तपाईं सित्तै लोगो डिजाइन गर्दै हुनाले, डिजाईनिंग भाग वा पृष्ठपोषण अंशको लागि व्यावसायिक ग्राफिक डिजाइनर संलग्न गर्ने सम्भावना धेरै नै छैन। एकचोटि तपाईंले आफ्नो लोगो नि: शुल्क डिजाइन गर्नुभयो।
तपाइँका साथीहरू, परिवार र यहाँ सम्म कि अपरिचितहरूलाई पनि सामेल गर्नुहोस्, यदि तपाइँ सक्नुहुन्छ भने दोस्रो धारणा प्राप्त गर्नुहोस्। तिनीहरू काम गर्दछन्, आखिरमा, ग्राहकको रूपमा पनि। यो तपाइँको दर्शकहरूको साथ समानुभूति गर्न एक द्रुत र प्रभावकारी तरिका हो, तिनीहरूको दिमागमा जानको लागि र तिनीहरूको आवश्यकताहरू पहिचान गर्न।
लोगो भेक्टर को लागी तपाइँको विचारहरु लाई मंथन गर्नुहोस् किनकि अफलाइन सफ्टवेयर मा वेक्टर को उपयोग गरी नि: शुल्क को लागी एक लोगो को डिजाइन गर्न को लागी यसको बारे मा जाने को लागी सब भन्दा छिटो तरीका हो। र यसलाई माथि गर्न को लागी, भेक्टरहरु मात्र विचारहरु जस्तै छन्। तपाइँ उनीहरुलाई नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाइँ चाहानुहुन्छ, र यसको विपरीत।
तपाईंको लोगोको डिजाइनमा पर्याप्त सेतो खाली ठाउँ समावेश गर्नुहोस्, तपाईंको डिजाइनमा भिजुअलहरूका लागि सास फेर्न त्यो सेतो खाली ठाउँ चाहिन्छ।
अन्तिम डिजाइन सिर्जना गर्नु अघि पर्याप्त पटक अभ्यास गर्नुहोस्।
यो एक मुड बोर्डको बिरूद्ध मिलाउनुहोस्। मुड बोर्डमा छविहरू र अन्य लोगोहरू जस्ता दृश्यका प्रत्येक प्रकार समावेश हुन्छ जुन तपाइँको ब्रान्डले उही vibe छोड्ने महसुस गर्दछ। यदि तपाइँको लोगो मा उही vibe दिन्छ, यो जान राम्रो छ।
तपाईंको जस्तै उस्तै ठाउँमा ब्रान्ड प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य लोगोहरूसँग तुलना गर्नुहोस्। तपाईको लोगोको जे क्षेत्र पनि टाढाको बाट अर्को लोगोकोसँग मिल्दो छ, यसलाई काट्नुहोस् र त्यस क्षेत्रलाई बिभिन्न तरीकाले पुनः डिजाइन गर्नुहोस् जबसम्म तपाई सबैको सबैभन्दा अनौंठो डिजाइनमा पुग्नुहुन्न।
नि: शुल्क लोगो डिजाइन गर्न समय खपत र सुस्त हुन सक्छ तपाईं चाहानुहुन्छ… वा पूरै विपरित। यो सबै तपाइँले छनौटहरूमा उमाल्छ, तपाइँ आफ्ना झुकावहरूबाट कति राम्रोसँग सिक्नुहुन्छ र भिजुयल आर्टरी जस्तो तपाइँ छनौट गर्नुहुन्छ।
A कसरी लोगो डिजाइन गर्ने?
बिलबोर्ड डिजाईन गर्दा मैले के विचार गर्नुपर्छ? →